Wararka - Immisa nooc oo dhar caadi ah ayaa jira?
Dharka firaaqada guud ahaan waxaa loo qaybin karaa xilliyada firaaqada ah, raaxeysiga isboortiga, raaxada jaceylka, xilliyada firaaqada iyo baashaalka.
1. Avant garde dharka caadiga ah:
Dharka caadiga ah ee Avant-garde, oo sidoo kale loo yaqaan dharka caadiga ah ee dharka, ayaa ah midka guud ee dharka caanka ah ee diyaarka ah, oo si buuxda uga tarjumaya qaabka naqshadeynta, naqshadeynta naqshadeynta iyo hagida jihada moodada. Xilligii xilliyada firaaqada, naqshadeeyayaasha moodooyinka ee caasimadaha waaweyn ee adduunka ayaa adduunka u sii daaya waxa loogu yeero moodada-dhamaadka sare iyo dharka diyaar-garowga sare leh oo adduunka loo diyaariyo laba jeer sanadkii, badankooduna yihiin kuwa loo yaqaan 'avant-garde style' oo aan caadi ahayn. Muuqaalka guud ee dharka caadiga ah ee loo yaqaan 'avant-garde' oo ah dharka caadiga ah ayaa ah in tiro aad u tiro badan oo dhar cusub ah ama hal abuur leh la isticmaalay, qaabku waa ka duwan yahay, qaabku waa avant-garde, midabka iyo qaabkuna waa mid gaar ah. Si aan ula kulanno dhadhanka dadka cusub ee moodada ah una hagno moodada soo jabka ah, waxaan isku dayeynaa sida ugu fiican inaan u muujino gaar ahaanta qaabka astaanta iyo naqshadeynta naqshadeynta. Suuqa dhexdiisa, qaababka xilliga firaaqada ee magaalooyinka ayaa wata kooxo adeegsiga moodooyinka kala duwan iyo hanuuninta bilicsanaanta sidoo kale waxaa iska leh dharka noocan ah, laakiin la qabsiga ayaa aad u ballaaran, qaabkuna ma noqon doono mid aad uga duwan.
2. Dhar Isboorti:
Dharka isboortiga daruuri maahan dharka isboortiga ee loogu talagalay tartanka ay xirtaan ciyaartoy xirfadlayaal ah, laakiin waa nooc ka mid ah isboortiga oo leh isboorti. Dharka caadiga ah ee isboortiga waxaa loogu talagalay inuu la kulmo shaqooyinka isboortiga qaarkood, oo muujin kara dareenka iyo qaabka adag ee isboortiga ee ciyaaraha firaaqada. Qaabka dharka isboortiga ayaa inta badan ku dhow habka isboortiga, oo leh cidhiidhi dhexdhexaad ah, midab dhalaalaya, fududahay fidinta iyo waxqabadka wanaagsan. Qaabkiisa, shaqadiisa iyo firfircoonidiisa marwalba waxaa jeclaaday dadweynaha, gaar ahaan dhalinyarada. Iyada oo ku saleysan fikradda bilicsanaanta caanka ah, dharka isboortiga wuxuu diiradda saarayaa tayada qalabka dusha sare, tiknoolajiyada goynta iyo guusha ama guuldarada habka hawlgalka calaamadaha si loo go'aamiyo qiimaha suuqa ee alaabooyinka.
3. Dharka caadiga ah ee jacaylka:
Xirashada dharka caadiga ah ee jacaylka ahi waa nooc ka mid ah dharka caadiga ah ee dareenka jacaylka leh. Dharka loogu yeero gabadha, dharka marwada iyo qaar ka mid ah dharka caadiga ah ee guryaha ayaa ah noocyada caadiga ka ah suuqa. Astaamaha guud ee lebis jaceylka caadiga ah waa xariiqyo jilicsan oo siman, midabbo taajir ah, muuqaal balaaran oo balaaran, qaab jilicsan iyo kareemo macaan, qaabab kartoon jilicsan iyo qurux badan, iyo tiro badan oo ka mid ah walxaha qurxinta sida xargaha, qaansada, mowjadaha durian, daabacaadda iyo walxaha kale ee qurxinta ayaa si ballaaran loo isticmaalaa si loo abuuro jawi jacayl oo dhab ah iyo qaab xilli firaaqo ah.
4. Dharka caadiga ah ee ganacsiga ：
Xirashada dharka caadiga ah ee ganacsiga, oo sidoo kale loo yaqaan xirashada dharka caadiga ah ee xirfadleyda, waa erey umuuqda kuwo is burinaya, laakiin xaalada haatan taagan ee dharka dadka casriga ah, xitaa xilliyada adag iyo kuwa ganacsiga rasmiga ah, isdhexgalka qaabka firaaqada waa lama huraan. Sidaa darteed, xirashada dharka caadiga ah ee ganacsiga waxaa loo arki karaa inay tahay kala duwanaanta dharka ganacsiga, taas oo ah isku-darka dabiiciga ee qaabeynta dharka rasmiga ah iyo waxyaabaha firaaqada ah ee caanka ah. Naqshadaynta dharka noocan oo kale ah waxay asal ahaan haysaa qaabka tusaalaha iyo qaabka aasaasiga ah ee dharka rasmiga ah. Waxay diiradda saaraysaa faahfaahinta qaabdhismeedka, waxyaabaha ka kooban, midabka, dharka, iyo hababka teknolojiyadda si loogu sameeyo wax ka beddello qaarkood, si ay si habboon ugu dhex milmaan astaamaha caanka ah ee xilliga firaaqada ee dharka ganacsiga, si loo gaaro adag laakiin aan adag, saameyn aan caadi ahayn, si kor loogu qaado isku xirnaanta shaqada.
5. Dharka caadiga ah ee dalka:
Dharka caadiga ah ee wadanku waa dharka ugu raaxada badan taariikhda. Xaqiiqdii, dharka ay soo xirteen mudanayaal waddanku qarnigii 19aad waxay ahaayeen nooc ka mid ah dharka xilliga firaaqada casriga ah, gaar ahaan dhinaca labiska ragga. Waxyaabaha fudud, moodeelka iyo raaxeysiga iyo qaabka bilaashka ah ee macdanta qallafsan ayaa noqotay dareenka dhabta ah ee dadka ku soo noqonaya dabeecadda una doodaya dabeecadda. Dharka aan caadiga ahayn ee miyiga waa nooc ka mid ah dharka xilliga firaaqada oo ay xirtaan dadka reer magaalka casriga ah ee leh dareenka miyiga, taas oo ka tarjumeysa isku-buuqsanaanta dadka casriga ah. Gobolku wuu kaxeeyaa, waqtiyada iyo dareenka bilicsanaanta shakhsi ahaaneed, dharka xilliyada firaaqada ee miyiga waxaa lagu soo koobay noocyo kala duwan oo suuqa ka mid ah, sida "xirashada xilliyada firaaqada ah ee qaranka", "dharka xilliga firaaqada ee dadka", "dalxiiska iyo fasaxa xilliga firaaqada ee fasaxa ah".